Waa in 70 Sano ciidamda AMISOM ay joogaan Dalka Soomaaliya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Waa in 70 Sano ciidamda AMISOM ay joogaan Dalka Soomaaliya
Soomaaliya waxeey wajahayaa halis burbur dowladnimo , hoggaaminta Madaxweyne Farmaajo waxaa laga dhadhansan karaa dhaqanka kaligii taliye Mohamed Siyaad Barre oo kale inuu yeeshay.
Hadii Mohamed Abdullahi Farmaajo oo 30 sano ku dhawaad ku noola Mareykanka oo kajirto dowlad ku dhaqanta sareenta sharciga , isla xisaabtanka iyo Dowlad aanan dhinaca ugu talaabi karin dastuurka in maanta u udhaqmo sida Askar Ciidan oo duurgal ah talada dalkana ku qabsaday xoog markii laga fiiriyo habdhaqanadaan oo kale.
Adeegsiga Ciidamada sifo aan sharci aheyn waliba iyadoo ay dheertahay qofkasto dowlada kasoo horjeedo asagoo maxkamad xukumin in loogu yeero qaran dumis. & cagajugleeyn joogta ah.
Canshuurta laga qaado shacabka oo lagu maamulo rabitaanka shaqsiga Madaxweyne Farmaajo iyadoo lasiiyo cidii uu Madaxweynaha Jecel yahay lagana jaro qofkii Madaxweynaha kafikir dowan xitaa hadii uu dowlada katirsan yahay. Ansixinta Miisaaniyada waa sawir dowladnimo lkn ku dhaqankeeda ayaanba jirin. caawa hadii uu doono 5 Milyan oo dolar ayuu qasnada dowlada intuu kabixiyo ayuu siinayaa qof shaqsi ah Madaxweynaheena.
Ciidamada & shaqaalaha Dowlada waxaa laga sifeeyay wixii aan guul wadeen aheen iyadoo aan la ixtiraameynin xeerarka lagu maamulaayo ciidamada & shaqaalaha taasi waxeey keentay in quluubta shaqalaha soomaaliyeed ineey ku jirto hadii aan guul wadeen biilka reerka leega jarayaa .
Garsoorka dalka ayaa toos u hoostagta Madaxweyne Farmaajo asagoo bixiya amarada ay goaan ku gaaran Maxkamadaha dalka hadii Golaha adeega garsoorka uu isku dayo in uu wadada loogu talagay inuu kaleexdo waxaa looceerina sida AVV . Suleeman Gudoomiyihii hore ee Maxkamada Sare dalka .
Diblumaasiyiinta Soomaaliyeed ee qibrada & aqoonta u lahaa howlahaas waxaa lagu badalay dhalinyaro qaarkood aanan waxbarasho jaamacadeed heesan balse ah guulwadayaasha Madaxweynaha .
Wuxuu hortaagan yahay doorasho la isla ogolyahay in ay dalka kadhacdo wuxuuna raadinaya mudo kordhin xoog & xeeladba .
dhaqamadaas & hogaamin laga dheehan karo kaligii Talisnimo ayuu ku dhaqmaa Madaxweyne Farmaajo , waxaa u danbeeysay habkii uu uceeriyay Hassan Ali Khayre in ay aheyd arrin ka fog sharuucda dalka u dagsan wuxuuna awood ciidan u adeegsaday Raisal Wasaaraha xitaa wuxuu u diiday in uu Xafiiskiisa tago .
Haddaba Mohamed Abdullahi Farmaajo oo mudo 30 sano ku noolaa wadan ayka jirto dimuqraadiy & sareenta sharciga in maanta uu udhaqmo Askari xoog dalka ku qabsaday oo kale waxeey tusaalo cad u tahay qof kasto soomaaliya joogay xiligii Dowladii Siyaad bare in Maskaxdiisa ay ku jirto in dowladnimada tahay dhaca hantida qaranka , adeegsiga ciidamada & kutumashada sharuucda dalka iyadoo wadanka lagu hogaamiyo digreeto.
Sidaasi darteed waxaa Qaramada Midoobay & African Union lahaboon in 70 sano hada kadib ay ciidamada AMISOM joogaan gudaha wadanka Soomaaliya si loo ilaaliyo dimuqraadiyada curdunka ee ladoonayo ineey ka dhaqan gasho dalka .
Mudada 70 sano ee dhiman waxaa dhimanayaa jiilka hormuudka u ah siyaasada dalka & kuwa kuxige ee badali lahaa, waxaana lagaarayaa jiil ku dhasha kuna dhaqma sareenta sharciga & dimuqraadiyada markaas soomaaliya dowladnimadeda waxeey kabadbaadeysa kursi jaceel owgiis in uu dalka markale u burburo.
Hadii aad wareesatid dadka shacabka ah oo aad tiraahdid kawaran habdhaqanka Madaxweynaha waxaad arkeeysa qaar dhahayaa Madaxweynaha waa rag xoog ayuu isticmaalaya ninka raga waa in uu adeegsada awood waxkasto ka hor yimaada burburiya.
arrintaasi waxeey ku tuseeysa in micnaha dowladnimada & sareenta sharciga in aysan fahansaneen shacabka intiisa badan oo hadii ay ogaan lahayeen in dal uu ku dhisnaan karo kaliya in lagu dhaqmo waxaa bulshada ay hishiis ku tahay marnaba burbur lama galeen xalada hada ku jirno sidaan ma ahaaten.
Soomaaliya badbaado uma ahan kaliya hogganka hada joogo in la badalo ee waxaa hormar & dowladnimo u ah in jiilkaan hada nool in Qaramada Midoobe & african Union utaliyaan waa hadii ladoonayo in labadbaadiyo Nafta & nolosha Muwaadinka .
Previous articleSoomaaliya oo noqotay tusaale lagu cabsiyo shucuubta caalamka
Next articleA Somali health advocate’s crusade against skin lightening, a vestige of colonialism, becomes a federal public health issue